Amb Amerika oo Abaalmarin lagu gudoonsiiyay Xaflad Holland loogu qabtay+ Sawiro | Moment Union Somali Diaspora
Posted on March 18, 2012 by momentunion
18 March 2012 Moment Media Group- Xaflad si weyn loo soo agaasimay, laguna soo dhoweynayay Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Ameeriko ayaa lagu qabtay Hotel Green Prk ee magaalada Den Haag, waxaana munaasabadan ay aheyd mid ay soo qaban qaabiyeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Nederland.
Xubno isugu jiray qeybaha bulshada ayaa kasoo qeybgalay xafladani, waxaana khudbado lagu soo dhoweyn ah kasoo jeediyay aqoonyahano Soomaaliyeed oo lagu casuumay xafladani, kuwaasi oo ku dheeraaday iney ka hadlaan waxqabadka Ambassador Maxamed Cali Ameeriko.
Eng. Guuleed Axmed Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Nederland ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay waxqabadka Safaaradda Soomaaliyeed ee Kenya iyo dadaalka ay u gashay sidii nolol wanaagsan u heli lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan xerooyinka qaxootiga Kenya.
Guuleed ayaa meesha ku soo bandhigay filim ka tarjumaya shaqooyinkii uu qabtay Ambassador Ameeriko kaasoo muujinayay sida Safiirka u garab taagan yahay dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan xerooyinka qaxootiga Kenya.
“Markaan arkay inuu dadkaas dhibaateysan ag joogo waxaan u gartay wax kasta oo uu i weydiiyo inaan iraahdo OK, xaqa & waxyaabaha uu sameeyey ku garab istaaga, siyaasi ma ahan waa amb, safaaradaha ayuu u baryaa dadkaan si wax loo gaarsiiyo oo uu yiraa taga meesha” ayuu yiri Eng. Guuleed.
“Meel aan aadno ma jirto haddii uu isbitaal ku jiro rag baa igu yiri oo xoog leh, iga aqoon & karti badan, haddii aan ninkaas weyno dhibaato weyn ayaa noo imaaneyso”
“Ninkaan Madaxweynenimo uma socdo 100%, ilaa ilmahaas agoonta ah ay wax barasho helaan, nolol na helaan, mana jirto qof sidaas wax u qabtay” ayuu yiri Guuleed.
Axmed Warsame oo ka tirsan mas’uuliyiinta Safaaradda Biljamka ee Soomaaliya ayaa isna goobta ka hadlay wuxuuna ka hadlay waxqabadka Safaaradda Soomaaliyeed ee Kenya, isagoo sheegay in wax muuqda ay shacabka Soomaaliyeed u qabatay Safaaradda Kenya tan iyo markii la magacaabay Ameeriko, sidoo kale xubnihii ka hadlay meesha waxaa ka mid ah Salaado Cali Maalin oo ku hadleysay magaca Haweenka Soomaaliyeed ee Holland ku nool.
Maxamed Roberto oo ka mid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed ee mudada ku nool dalka Talyaaniga kana howlgala Tv-ga dalkaasi ee Rai ayaa u mahad celiyay Safiirka, wuxuuna ku booriyay in uu howsha uu u haayo shacabka Soomaaliyeed sii labo jibaaro.
Dahir Cabdulle Calasow oo ka mid ahaa Wariyeyaashii kasoo qeybgalay kulankani ayaa dhankiisa sheegay in aan wax hal maalin looga sheekeyn karo aheyn waxqabadka Safiir Ameeriko, cidkastana waxa ay shacabkeedka wax tarta ay taariikhda xusi doonto.
Ambassador Maxamed Cali Ameeriko ayaa u mahad celiyay guud ahaan Jaaliyadda Soomaaliyeed ee juhdiga geliyay casuumadda iyo soo dhoweynta ay u sameeyeen, wuxuuna ugu warbixiyay howlaha Safaaradda Soomaaliya ay u qabato guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
“Wixii aan qabtay waajibkeyga un bey aheyd, waana tan leygu soo magacaabay inaan wax taro shacabkeyga” ayuu yiri Ambassadorka oo ka hadlay arrimaha siyaasadda iyo horumarka ay Dowladda KMG ku tallaabsatay, taasoo u sabab ugu dhigay shirarka dib u heshiisiinta ee ka dhacay gudaha dalka.
“Shirarkii wadanka gudihiisa ka dhacay wax weyn bay bedeleen, mar kastana waxaan kaga doodi jiray meel walba in shirarka dib u heshiisiinta wadanka gudihiisa waa in ay ka dhacaan, haddii Xamar aanu amaan jirin magaalooyin ammaan ah ayaa jira sida Gaalkacyo, Garoowe xittaa Hargeysa” ayuu yiri Safiir Ameeriko.
Mar uu ka hadlayay arrimaha qaxootiga Soomaalida ee Kenya u nool ayuu sheegay in xerada adduunka ugu weyn ee Dhadhaab ay ku jiraan 550 kun, kuwaasi oo 95% Soomaali ah, wuxuuna ugu mahad celiyay Dowladda Kenya in wadankeeda ay ku noolaadaan si nabad ah.
“2 sano ka hor raashinkii markii aan qeybinay ayaa teendho ay islaan weyn ay ku jirto, canjeero ayey karineysay soo gal ayey tiri, markaan soo galay ayey tiri eedo fadhiiso, aniga & 2-dii cunug ay ayeeyada u aheyd, canjeeradii ay karineysay ayey aniga & ilmihi wada cuna igu tiri, aniga ilin ayaa iga timid, meel kasta oo aan tago dadka aan la kulmo arintan waa u sheegaa” ayuu yiri Safiirka.
“Buugaag & qalmaan ayaan xerada Dhadhaab geeyey, gabar 13 jir ah oo aan kula kulmay meeshaas ayaa waxey tiri keligaa ayaa ku rabaa ee gees aan istaagno, waxay i weydiisay adeer ilmo ma dhashay, gabdho da’deyda oo kale ah, adeer markaad laabato, gabdhahaas waxa ay heli karaan weydii ee ay u baahan yihiin, markaas kadib waxaan u sheegay ganacsatadii Soomaaliyeed ee Kenya, maalintaas wixii ka danbeeyay ilaa hada waxaa loo qoondeeyay in loo geeyo alaabta gabdhaha ay isticlaan” ayuu yiri Safiirka oo intaa raaciyay in kaalmadaasi ay wax badan kor ugu qaatay niyada caruurtaasi.
“Boqortooyo ma ahan shaqada, waa howl dowladeed, waa la iska qaadi karaa laakiin waa in nidaam loo soo maraa” ayuu yiri Safiirka oo ka hadlayay warar maalmahan soo baxayay oo sheegayay in safiirka la badali doono.
Hase ahaatee guud ahaan xubnihii ka hadlay munaasabadan ayaa cod dheer ku sheegay in aan la aqbali karin wararkaasi maalmahan soo baxayay, waxayna Dowladda KMG ugu baaqeen in fikirkaasi hadii uu jiro ay haboon tahay in lagu dhaqmo, iyagoo sheegay in dadka shacabka indhaha u ah ee wax u qabta lagula kicin falal aan habooneyn iyadoo la fiirinayo rabitaanka shacabka.
ugu danbeyntii waxaa lagu soo bandhigay qorshe tabarucaad loogu sameynayo caruurta Agoonta ah, Dumar iyo dadka waayeelka ah ee aan waxba qabsan karin, kaasoo dhaqaale loogu aruurinayo isla markaana guryo iyo goobo waxbarasho loogu dhisayo gudaha dalka, waxaana loogu magac daray qorshahaasi H.E.Dr. Maxamed Cali Ameeriko Foundation 2012, waxaana madax looga dhigay Ambassador Ameeriko. sidoo kale waxaa goobta lagu guddoonsiiyay bilad sharaf iyo howl karnimo.